Abavelisi beendaba - Abathengisi beendaba base China kunye neFektri
I-RFID ifezekisa ukulandelelana kokutya ukubonelela ngesiqinisekiso sokwakha abantu
ngomphathi ku 21-07-29
Ngapha koko, kubomi bethu bemihla ngemihla, iindaba malunga nemiba yokhuseleko lokutya zihlala zisezindlebeni zethu. Kwimisitho evezwe kuMbutho wabaThengi nge-15 kaMatshi minyaka le, ukhuseleko lokutya lihlala liyinto exhalabisayo. Kukho imiba engapheliyo malunga nokhuseleko lokutya, kunye nolawulo oluhambelanayo ...
Siyavuyisana nokubizwa ngempumelelo kwentlanganiso ekhethekileyo yemali-yemidlalo ye-Chengdu ye-Intanethi yamashishini eprojekthi！
ngomphathi ku 21-07-28
NgoJulayi 27, 2021, i-2021 Chengdu Intanethi yezinto zeprojekthi zeshishini elikhethekileyo kwintlanganiso yezemali yomdlalo wokudibanisa yabanjwa ngempumelelo kwi-MIND Science Park. Le nkomfa ibibanjwe yiSichuan Internet yeZinto zoPhuhliso loManyano, iSekhuan eDityanisiweyo yeSekethe kunye noLwazi ...
Itekhnoloji ephezulu yokulwa nomgunyathi kwicandelo le-Intanethi lezinto
ngomphathi ku 21-07-21
Itekhnoloji yokulwa nomgunyathi kuluntu lwanamhlanje ifikelele kubude obutsha. Okukhona kunzima kubenzi bomgunyathi, kokukhona kulula ngakumbi ukuba abathengi bathathe inxaxheba, kwaye okukhona itekhnoloji yokulwa nomgunyathi iphezulu, kokukhona kuya kuba ngcono ukusebenza komgunyathi. Yinto ...
Ndiyakuvuyela ngokumangalisayo nokumangalisayo uChengdu Maide ngokugqitywa ngempumelelo kwenkomfa yonyaka wama-2021 kunye nemisebenzi yokwakha amaqela!
ngomphathi ku 21-07-14
U-Chengdu Mind IoT Technology Co, Ltd. ubambe intlanganiso yesishwankathelo seminyaka esi-9 ku-Julayi 9, 2021. Ngexesha lentlanganiso yonke, iinkokheli zethu zichaze iseti yedatha enomdla. Ukusebenza kwenkampani kule nyanga ezintandathu zidlulileyo. Ikwaseta irekhodi elitsha eliqaqambileyo, elimakisha iperfec ...
Wamkele ngokufudumeleyo ummeli weCatalonia Shanghai ukutyelela iChengdu Mind IOT TECHNOLOGY CO., LTD!
Ngomhla kaJulayi 8, 2021, amalungu amalungu abameli bommandla waseCatalan eShanghai baya e-Chengdu Mind IOT TECHNOLOGY CO., LTD. ukuqala uvavanyo losuku olunye kunye notshintshiselwano lodliwanondlebe. Ummandla waseCatalonia unommandla we-32,108 yeekhilomitha, ubuninzi bezigidi ze-7.5, abenza i-16% ...
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yeRFID kwicandelo lolawulo lweenxalenye zezithuthi
Ukuqokelelwa kunye nokulawulwa kweenkcukacha zamalungu ezithuthi ezisekwe kwitekhnoloji ye-RFID yindlela yolawulo ekhawulezayo nenesiphumo. Idibanisa iithegi zombane zeRFID kumacandelo emveli olawulo lweendawo zokugcina kunye nokufumana ulwazi ngee-auto kwiibhetshi ezivela kumgama omde ukufezekisa ngokukhawuleza ...
Iinkqubo ezimbini zokuhlela ezisekwe kwi-RFID: i-DPS kunye ne-DAS
ngomphathi ku 21-06-30
Ngokunyuka okukhulu kwenani lempahla yoluntu lonke, umthwalo wokuhlela uye usiba nzima ngokuba nzima. Ke ngoko, iinkampani ezininzi nangakumbi zizisa ngeendlela eziphambili zokuhlela ngokwedijithali. Kule nkqubo, indima yetekhnoloji yeRFID iyakhula. Zininzi ...
I-NFC "chip yentlalo" yathandwa
ngomphathi ku 21-06-29
Kwindlu yokuhlala, kwimivalo edlamkileyo, abantu abancinci akusafuneki bongeze i-WhatsApp kumanyathelo amaninzi. Kutshanje, "isincamathelisi ekuhlaleni" sele sithandwa. Abantu abancinci abangazange bahlangane kumgangatho wokudanisa banokongeza ngokuthe ngqo izihlobo kwiphepha lasekhaya lezentlalo ngokukhupha iifowuni ...
Ukubaluleka kweRFID kwimeko yezothutho yamazwe
Ngokuphucuka okuqhubekayo kwenqanaba lehlabathi, utshintshiselwano lwamashishini ehlabathi nawo ayanda, kwaye iimpahla ezininzi nangakumbi kufuneka zisasazwe kwimida. Indima yetekhnoloji yeRFID ekuhanjisweni kweempahla nayo iya isiba ngokubalaseleyo. Nangona kunjalo, amaza r ...
Iminqweno yeholide yenkampani kunye nesipho
Rhoqo ngeholide, inkampani yethu iya kubonelela ngezibonelelo zenkampani kubasebenzi nakwiintsapho zabo, kwaye ithumele iminqweno yethu emihle, Siyathemba ukuba wonke umqeshwa kwinkampani unokuba nobushushu ekhaya. Ibiyinkolelo kunye noxanduva lwenkampani yethu ukuvumela wonke umntu ukuba afumane uluvo lokuba ngowakhe kule ntsapho ...
Ingqondo ka-Chengdu yazimasa izixhobo nezixhobo zokusebenza ze-Guangzhou kunye nomboniso wetekhnoloji!
ngomphathi ku 21-05-28
Ngexesha lika-Meyi 25-27th wama-2021, i-MIND yazisa okokugqibela ii-RFID Logistics Tags, iiNkqubo ze-RFID zoLawulo lweeMpahla, iiNkqubo zoLawulo lweeFayile eziKrelekrele, iiNkqubo zoLawulo lweeNdawo eziGcinekileyo, kunye neNkqubo yokuLawulwa kokuBethana nokungqubana kwi-LET-umsitho we-CeMAT ASIA. Sijonge ukukhawulezisa uphuhliso s ...
Sivuyisana ngokufudumeleyo nenkampani yethu ngokufumana ngokusemthethweni uphawu lwentengiso lwakwaU
Emva koSuku lwaBasebenzi nge-1 kaMeyi, sineendaba ezimnandi have Silubhalisile ngempumelelo uphawu lwentengiso lwase-US kunye ne-US Patent kunye neOfisi yophawu lwentengiso. Umbala (obomvu) omnyama nomnyama ngu / ar ...